सोसल मिडियाको प्रयोग नेपालमा राम्रै कामको लागि भएको पाउँछु-विनीता गुरुङ - MeroReport
सोसल मिडियाको प्रयोग नेपालमा राम्रै कामको लागि भएको पाउँछु-विनीता गुरुङ
काठमाण्डौ निवासी विनीता गुरुङ कृषि विज्ञानसंग सम्बन्धित बिषय माटो विज्ञानकी विद्यार्थी हुन् । यही विषयको अध्ययनका क्रममा कृषि तथा पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपूर चितवनबाट कृषि बिज्ञानमा स्नातक तहको अध्ययनपछि जागिरको सिलसिलामा नेपालका गाउँ-ठाउँ कुना काप्चा पुग्ने मौका मिल्यो उनलाइ । ग्रामीण जनजीवन र परिवेशलाई अझ नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएकै कारणले हुनुपर्छ आफ्ना भोगाइ र अनुभवलाइ अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा ब्लगिङ थालेकी विनीता भन्छिन-'शायद तिनै अनुभवहरूले होला, भविष्यमा पनि ग्रामीण तथा सामुदायिक विकासमा लाग्ने सोंच बनाएकी छु ।' यसपटकको मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगमा हामीले Random thoughts! नामक ब्लगमार्फत ब्लगिङ गरिरहेकी उनै विनीता गुरुङसंगको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ बिनितासंग गरिएको कुराकानी:
सोसल मिडियामा आफूलाई यसरी नै चिनाउँछु भन्ने छैन । ब्लगरको रूपमा भन्नुहुन्छ भने म नियमित रूपमा ब्लग लेख्दिन, कहिलेकाहीँ जाँगर चल्यो भने मात्र लेख्छु । हुन त ट्विटरलाई माइक्रो ब्लगिङ्ग साइट पनि भनिन्छ, त्यता चाहिं म नियमित जसो धाइरहेकी हुन्छु । त्यसकारण "माइक्रो-ब्लगर" भन्न मिल्ला कि ? ;) बिशेष गरी नेपाल र अन्तका खबरहरू थाहा पाउन अनि तिनका बारेमा अरूका बिचार बुझ्न म ट्विट्टर चलाउँछु । कहिले काहीं आफूलाई लागेका चित्त बुझेका-नबुझेका कुराहरू पनि राख्छु । त्यत्ति हो।
तपाँइको ब्लग http://bineetagrg.blogspot.ca/ मात्रै कि अरु पनि छन?
त्यही मात्र हो । त्यसैमा त नियमित हुन सकेकी छैन, अरू पनि हुने कुरै भएन ।
तपाँइको ब्लगको नाम Random Thoughts मा नेपाली अँग्रेजी दुबै भाषामा लेखिएका ब्लगपोष्टहरु रहेछन् । खासमा यहाँको ब्लगिङको रुची के हो भाषा तथा लेख्ने बिषयबस्तु दुबैका बारेमा भन्नुपर्दा?
भाषाको कुरा गर्नुपर्दा, मलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा लेख्न/पढ्न उत्तिकै आनन्द लाग्छ। ब्लगमा चाहिँ नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमा धेरै लेखेकी छु । मूल कारण नेपालीमा टाइप गर्नाको गाह्रो नै हो। कनिकुथी एकदुइटा पोष्ट नेपालीमा लेखेकी छु, तर राम्ररी हेर्ने हो भने प्रशस्त मात्रामा त्रुटिहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिं मैले टाइप गर्दा बिग्रेको सच्याउन अल्छी गरेकी हुँ । जहाँसम्म बिषयबस्तुको कुरा छ, यही नै भन्ने छैन । कतिपय आफ्नै निजी जिन्दगीका भोगाइहरू समेट्ने कोशिश गरेकी छु। कहिले काहिँ आफूले पढेको/बुझेको/देखेको/सुनेको कुराहरू पनि बाँड्छु ।
ब्लगिङ्ग गर्न थालेको धेरै भएको छैन । २०१२ को अन्तिम तिरबाट थालेकी हुँ। स्कूल/कलेज हुँदा अलि अलि लेख्थें, तर पछिल्ला दिनहरूमा लेख्ने क्रम टुटेको जस्तो लाग्यो। अभ्यास पनि खासै रहेन । त्यसैले आफ्नो लेखन कार्यलाई निरन्तरता दिउँ भनेर मात्र हो ब्लग गर्न थालेको। नढाँटी भन्नुपर्दा बिना कुनै एजेन्डा थालेकी हुँ मैले ब्लग लेख्न । त्यही कारणले बिषयबस्तु पनि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
पक्कै पनि निरन्तर ब्लगिङ्ग गर्न गाह्रो हुन्छ, मूलत: समय अभावकै कारण । तर यो व्यक्तिमा भरपर्ने कुरा पनि हो । ब्लगिङ्लाई टाइमपासको रूपमा मात्र नलिएर कुनै ठोस उद्देश्यका साथ कोहि लाग्छ भने समय जुटाउन त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। ईच्छाशक्तिको कुरा पनि आउँछ। मैले कतिपय साथीहरू देखेकी छु, जो कार्य व्यस्तताका बाबजुत पनि सक्रिय रूपमा ब्लग गरीरहेका छन् ।
रुचि ? मलाई पढ्न (पाठ्यक्रमका किताब बाहेक) एकदम रमाइलो लाग्छ । पहिले पहिले खुब पढिन्थ्यो, प्राय: फिक्शन । अचेल फुर्सद नै हुन्न । मेरो पढाई पत्रपत्रिकाका स्तम्भहरू र अरूका ब्लगहरूमै सिमित छ हिजो आज । नयाँ बिषयबस्तु र उत्तिकै नयाँ बिचारहरू पढ्न पाउँदा अँझ बढी आनन्द लाग्छ ।
आफूले देखेका, सुनेका कुराहरूका आधारमा सोसल मिडियाको प्रयोग नेपालमा राम्रैको लागि भएको पाउँछु । धेरैजसो रमाइलोका लागि आउँछन् भने आफ्नो ज्ञान बढाउने साथै विचार पस्कने थलोको रूपमा पनि धेरैले यसलाई लिएको देख्छु । कतिपय त यसैका माध्यमबाट सामाजिक- राजनैतिक विसंगति/मुद्दाहरूलाई लिएर बहस छेंड्छन् । यति भनिरहँदा, मलाई 'अकुपाइ बालुवाटार'को याद आयो, जून सामाजिक संजालकै देन थियो । त्यस्तै गरिब, दीनदु:खी, अशक्तहरूको सहयोगार्थ धेरै काम भईरहेको पनि देख्छु । त्यस बाहेक देशविदेशमा बस्ने नेपाली हरूलाई जोडेर राखेको देख्दा सोसल मिडियाले राम्रै भूमिका खेलेको लाग्छ । एकाध अप्रिय घटनाहरू सुन्नमा नआएका पनि होइनन्, तर नराम्रो भन्दा राम्रो चाहिं धेरै देख्छु म ।
ब्लगिङ्को हकमा भन्नुपर्दा धेरैले आफ्ना व्यक्तिगत भावना/ विचार(कहिले काहिँ साहित्यिक सिर्जना पनि) पोख्न ब्लग लेखेको देख्छु । जून एक हिसाबले राम्रो मान्छु म । हामीमा पढ्ने र लेख्ने (स्कुले-पढाईका कुरा बाहेक ) संस्कार कमै छ । ब्लगिङ्ले केहि हदसम्म यो संस्कारको बिकास गरिदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । यस बाहेक माथि भनें झैं सामाजिक/आर्थिक/राजनैतिक/प्राबिधिक रूपान्तरणका लागि लेख्ने ब्लगरका विचारोत्तेजक लेखहरू सजिलै जहाँबाट पनि पढ्न पाउँदा नेपाली ब्लगिङ प्रयोगलाई सदुपयोग भएको नै मान्छु ।
अरूका ब्लगहरू चाख मानेर पढ्छु म। कति चाहिँ व्यक्तिगत रुपमा चिनेका साथीहरूको ब्लग पढ्छु भने सामाजिक संजालमा लिंक बाँडेका ब्लगहरू पनि पढ्न छुटाउँदिन सकभर । ती बाहेक मलाई मन पर्ने केहि ब्लगहरू (नेपाली, अंग्रेजी, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय) छन् जून म नछुटाई पढ्ने गर्छु, प्राय बिदाको दिन पारेर । मैले फलो गर्ने ब्लगहरू धेरै छन् तर एकदम राम्रो लाग्ने चाहिं यो छ: https://momobites.wordpress.com/ । पेशाले ऊनी (प्रशान्त खतिवडा) डाक्टर हुन् तर स्वास्थ्यका बिषयमा मात्र नभएर विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूका बारेमा सशक्त ढंगले लेख्छन्।
बिषयबस्तुको कुरा गर्नुपर्दा, मलाई सबैखाले ब्लगहरू पढ्न मन लाग्छ। जस्तोसुकै लेखाईमा पनि केहि न केहि सिक्न पाइन्छ भन्ने सोच राख्छु म। स्वभावैले पनि मलाई नयाँ नौलो कुराको जानकारी राख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसकारण, म भेदभाव नगरी भ्याएसम्म पढ्छु। कुनै ब्लगको भाषाशैली, शब्द चयन मीठो लाग्छ भने कुनैको विचार । कुनै लेख जानकारीमुलक/ खोजमुलक लाग्छन्। कुनै त म त्यतिकै रमाइलोको लागि पनि पढ्छु ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता? अरुका ब्लगहरु हेर्दा आचारसंहिता कत्तिको पालना भएको पाउनु भएको छ?
अचारसंहिता भएको राम्रो तर त्यसको नाममा लेख्नेको हातै बाँधिने किसिमका कुराहरू लादिनु हुन्न । ब्लगिङ गर्ने भनेकै आफ्नो मनमा लागेको कुरा लेख्ने हो, आफुले चाहे जसरी। तर लेख्नेले पनि जवाफदेही भएर लेख्नु पर्ने हुन्छ।
ब्लग लेखन सम्बन्धि खासै रमाइला घटना त छैनन् तर अहिले त्यै ब्लग लेख्या भरमा 'मेरोरिपोर्ट साताको ब्लगर'को यो अन्तरवार्ता दिइरहँदा चैं रमाइलो लागिराछ । जागिर खाने बेला दिएकी थिएँ अन्तर्वार्ता, तर यसरी सबैले पढ्न मिल्ने गरी चैं कहिल्यै दिएकी छैन । :)
फेसबुकले आफ्ना साथीभाइ, नातागोताहरूसंग सम्पर्कमा रहिरहन सहज तुल्याएको छ। अँझ विदेश बस्नेहरूका लागि आफ्ना परिवार/आफन्तजनहरूसंग जोडिरहन यसले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । एक किसिमले संचार जगतमा क्रान्ति नै ल्याएको छ ।
ट्विटरको कुरा गर्नुपर्दा, यसले नचिनेकाहरूसंग सम्बन्ध (चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् या व्यवसायिक) बिस्तारमा खुबै सहयोग गरेको छ । यसका अलावा आफ्ना रोजाईका/चासोका कुराहरूमा ज्ञान हाँसिल गर्ने (कहिले काहिँ बाँढ्ने) मौका पनि दिन्छ।
यति हुँदाहुँदै दुवै फेसबुक र ट्विटरले अनावश्यक रूपमा डिस्ट्र्याक्ट गराउन सक्छ । यसप्रति हामी सचेत हुनु जरुरी छ ।
ब्लगिङ्ग चै अलि फरक । आफ्ना विचारहरू समेटी, तिनलाई परिपक्व रुप दिने क्षमतामा वृद्धि गर्नुका साथै लेख्ने/पढ्ने संस्कारको विकास गर्नमा धेरै हितकारी छ ।
पक्कै पनि। कतिपय कुराहरू पत्रकारका आँखामा पर्दैनन् वा परेर पनि सहि ढंगले संप्रेषित हुन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा ब्लगिङ गरेर आफ्ना मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गरेका धेरै ब्लगरहरू छन् ।
नयाँ तथा पुराना ब्लगर सबैलाई उत्तिकै पहिचान र प्रोत्साहन दिने मेरोरिपोर्टको काम प्रशंसनीय छ। यसै हूलमा भर्खरै ब्लगिङ गर्न थालेकी मलाई पनि स्थान दिनुभएकोमा धेरै धन्यबाद मेरोरिपोर्ट टीमलाई ।
Comment by Pagal Basti on July 24, 2013 at 3:58pm
बिनिता जिलाई बधाइ
Comment by Basant Sharma on July 20, 2013 at 7:29am
congratulation Binita G,carry on.......
Comment by Binaya Shekhar on July 19, 2013 at 9:48pm
Congratulations Binita Gurung jee for being featured as blogger of the week. look forward to reading your post in meroreport and your own blog. keep blogging continue.